Kharashyada dhakhaatiirta la soo kireysto oo soo kordhaya - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Jaantus: Cagaarka kororka sannadkii 2012, casaanka kororka sannadkii 2013. Sawirle: SR
Kharashyada dhakhaatiirta la soo kireysto oo soo kordhaya
Publicerat måndag 13 januari 2014 kl 14.39
Maamulada arrimaha bulösha ee gobolada ayaa dhawr iyo tobankii sano ee ugu dambeeyey soo noqonayey kuwo baahidoodu ku xiran tahay dhakhaatiirta la kireysto, iyo weliba shaqaalaha kale oo ay ka mid yihiin kalkaaliyayaasha caafimaadka si loo haqabtiro hawlaha laamaha daryeelka caafimaadka.
Weriyayaasha Raadiyaha Iswiidhen ayaa isbarbardhigay kharashyadii sannadkii hore iyo kuwii sannadkii ka horreeyey ee 17 maamulo gobol ka mid ah 21 gobol oo dalka ka jira. Laba iyo toban ka mid ah waxaa ku soo kordhay kharashyada, oo ay gobolada qaarkood aad u kordheen. Gobolada Västerbotten iyo Östergötland waxay kharashyadaasi kordheen boqolkiiba 40.
Shan ka mid ahna kharashyada ku baxay waa isa soo dhimeen iyo heerkoodii hore ayey ku ekaadeen. Hadafkii uu ururka maamulada degmooyinka iyo gobolada Iswiidhen oo ahaa in inta sannadkaan lagu jiro boqolkiiba konton la dhimo kharashyadaas ayaan la gaari doonin.